နမ်းခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Sir Frank Dicksee ဆွဲသော ရိုမိယို နှင့် ဂျူလီယတ် နမ်းပုံ ပန်းချီ
နမ်းခြင်း သည် တစ်ယောက်၏ လျှာက အခြားတစ်ယောက်၏ တစ်နေရာကို ထိခြင်း ဖြစ်ပြီး မြတ်နိုးခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ကြိုဆိုခြင်း၊ ချစ်ခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ဆန္ဒ ကို ဖော်ပြသည်။
၁ ဇီဝဗေဒ နှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလည်းခြင်း
၂ နမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ခန္ဓာဗေဒ
၃ ရောဂါ ကူးစက်ခြင်း
ဇီဝဗေဒ နှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလည်းခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
မနုဿဗေဒပညာရှင် တို့သည် နမ်ခြင်း မှာ ပင်ကိုယ် သဘောပေလော သင်ယူ တတ်မြောက်သော သဘောပေလော ဆိုသည်မှာ ငြင်းဆိုကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။ နမ်ခြင်းသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်း သို့ ဦးတည်သည် မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ နမ်းခြင်းသည် သတ္တဝါ များလည်း ပြုကျင့်ကြသော ဖော်ရွေခြင်း (grooming) အပြုအမူ ဖြစ်ပြီး မိခင်တို့မှ ကလေးအား အစာခွံ့ခြင်း တို့မှလည်း ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။
နမ်းခြင်းသည် ရည်ရွယ်သူ မိတ်ဖတ်၏ အနံ နှံ့ အထိအတွေ့ စသည့် တို့ဖြင့် ဇီဝ ကိုက်ညီမှု (biological compatibility) အတွက် ဖီရိုမုန်း (pheromone) ကို စစ်ဆေးခွန့်ရစေသည်။ မိန်းမ တို့သည် ယောက်ျားများကို ရွေးချယ်ရာတွင် မသိစိတ်မှ မိမိ ဂျီနုံး (genome) နှင့် ကိုက်ညီသော သူကို ရွေးချယ်လေ့ရှိပြီး ကလေးများများ မွေးနိူင်ဖို့နှင့် heterosis ကြောင့် ရောဂါရမှု နည်းကာ မျိုးဆက်ပြန့်မှု ပိုမိုစေသည်။  
လူသာမက primate များသည်လည်း နမ်းကြသည်။ ခွေး၊ ကြောင်၊ ငှက် နှင့် အခြား သတ္တဝါ တို့သည်လည်း သူတို့အချင်းချင်းအား ရက်ခြင်း ပွက်သပ်ခြင်း ပြုကြသည်။ ၎င်းတို့ကို အချို့က နမ်းခြင်းဟု ယူဆကြသည်။
မိခင်မှ ကလေးအား နမ်းနေစဉ်
နမ်းခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော အပြုအမူဖြစ်ပြီး များမြောက်လှသော ကြွက်သားများ စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှု လိုအပ်သည်။ အတိအကျဆိုလျှင် အနမ်းတစ်ခု ပြုရန် ၃၄ ခုသော မျက်နှာ ကြွက်သားနှင့် ၁၁၂ ခုသော အခြား အထောင့်အပံ့ပြု ကြွက်သားတို့ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားရန် လိုသည်။ အရေးပါဆုံး ကြွက်သားမှာ orbicularis oris muscle ဖြစ်ပြီး ၎င်းက နှုတ်ခမ်းကို စုတ်သကဲ့သို့ စုကာ ပေးသောကြောင့် kissing muscle ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် ဖရန့်ကစ် တွင် လျှာသည်သာ အရေးပါဆုံး ဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းသည်နာ့ဗ်ကြောများ များစွာပါသောကြောင့် အထိ အကိုက် တို့ကို အလွန် သိသည်။
နမ်းခြင်းမှ mononucleosis၊ herpe စသည့် ရောဂါများ တံတွေးမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သည်။ သုတေသီများက HIV ရောဂါကို နမ်းခြင်းမှ ကူးစက်ခြင်းမရှိကြောင်း သက်သေပြထားသော်လည်း ၁၉၉၇ ခုတွင် တစ်ခုသော HIV ကို နမ်းခြင်းမှ ကူးစပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တံတွေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သွားဖုံး ရောဂါ ကြောင့် သွေးမှ တဆင့် ကူးစက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
↑ New evidence that the MHC influences odor perception in humans:astudy with 58 Southern Brazilian students.
↑ MHC-dependent mate preferences in humans
↑ Why do humans kiss?
↑ The kiss, Adrienne Blue,1996-06-01။ 23 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 August 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Seal with..146 muscles၊ Roger Highfield 2006-10-17။ 26 October 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နမ်းခြင်း&oldid=664165" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။